गित गाएरै किने प्रकाश सपुतले काठमाडौंमा यति सुन्दर घर ! – ताजा समाचार
गित गाएरै किने प्रकाश सपुतले काठमाडौंमा यति सुन्दर घर !
पछिल्लो समयका चर्चित गायक प्रकाश सपुतले काठमाडौंमा घर किनेका छन् । बाग्लुङ पुख्र्यौली घर भएका प्रकाशले आफ्नो गायन क्षेत्रबाटै आर्जन गरेको पैसाले काठमाडौंमा घर किनेका हुन् । उनले काठमाडौंमा घर किनेकोबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।सातौं बैवाहिक वर्षगाठको उपलक्ष्यमा उनीहरू आफ्नै घरमा बसाई सरेका छन् । संगितकर्मबाट आर्जन गरेको आयबाट आफुले घर किनेको प्रकाशको भनाई छ । उनले भनेका छन्, ‘मैले यो बिचमा व्यवसायिक रुपमा अरु केहि काम गरिन र गर्न जानिन र गर्न सकिन । मेरो विशुद्ध सांगितिक कमाई भनुम न ।’
पशुपति मन्दिरमा पूजा आजा गरेर फर्किदै गरेका प्रकाश सपुत, उनको श्रीमती र छोरी ।